Ruka 14 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 14:1-35
Murume aiva nechirwere chekuzvimba muviri anoporeswa paSabata (1-6)
Kana wakokwa zvininipise (7-11)
Koka vaya vasina chekukubhadhara nacho (12-14)
Mufananidzo wevanhu vakakokwa vakapa tuzvikonzero (15-24)
Zvinoreva kuva mudzidzi (25-33)
Munyu unenge usisavaviri (34, 35)
14 Mumwe musi akaenda kunodyira kumba kwemumwe mutungamiriri wevaFarisi paSabata, uye vaiongorora zvese zvaaiita. 2 Uye pamberi pake paiva nemumwe murume aiva nechirwere chekuzvimba muviri. 3 Saka Jesu akabvunza vaya vainyatsoziva Mutemo nevaFarisi kuti: “Zvinobvumirwa nemutemo here kurapa paSabata kana kuti hazvibvumirwi?”+ 4 Asi vakaramba vakanyarara. Akabva abata murume wacho, akamuporesa, akamuti aende. 5 Akati kwavari: “Ndiani wenyu angati kana mwanakomana wake kana kuti mombe yake ikawira mutsime+ paSabata orega kuibudisa pakare ipapo?”+ 6 Havana kukwanisa kumupindura mashoko aya. 7 Akabva ataurira vanhu vakanga vakokwa mufananidzo paakacherechedza kuzvisarudzira kwavaiita nzvimbo dzevanoremekedzwa.+ Akati kwavari: 8 “Kana wakokwa nemumwe munhu kumabiko emuchato, usagara panzvimbo yevanoremekedzwa.+ Pamwe mumwe munhu anokudzwa kukupfuura angava akakokwawo. 9 Uya akakukokai mese achabva auya oti kwauri, ‘Rega uyu agare pawakagara.’ Iwe uchabva waenda kunogara panzvimbo yakadereresa uchinyara. 10 Asi kana wakokwa, enda unogara panzvimbo yakadereresa, kuti kana munhu akakukoka auya, azoti kwauri, ‘Shamwari, enda apo pakakwirira.’ Uchabva wakudzwa pamberi pevamwe vaenzi vese.+ 11 Nekuti munhu wese anozvikwidziridza achaninipiswa, uye munhu wese anozvininipisa achakwidziridzwa.”+ 12 Akatiwo kumunhu akamukoka: “Paunogadzira kudya kwemasikati kana kwemanheru, usashevedza shamwari dzako kana vanin’ina vako kana hama dzako kana vavakidzani vako vakapfuma. Ukadaro vanogona kuzokukokawo, saka unenge wabhadharwa zvawakavaitira. 13 Asi kana waita mabiko, koka varombo, mhetamakumbo, vanokamhina, mapofu;+ 14 uye uchafara, nekuti havana chekukubhadhara nacho. Nekuti uchabhadharwa pachamutswa+ vakarurama.” 15 Paakanzwa mashoko aya, mumwe wevakanga vakokwa akati kwaari: “Anofara anodya zvekudya muUmambo hwaMwari.” 16 Jesu akati kwaari: “Mumwe murume akanga achigadzirira kudya kwemanheru kukuru,+ uye akakoka vazhinji. 17 Akatuma muranda wake panguva yekudya kwemanheru kunoudza vanhu vakakokwa kuti, ‘Chiuyai, nekuti zvekudya zvese zvagadzirwa.’ 18 Asi vese vakatanga kupa tuzvikonzero.+ Wekutanga akati kwaari, ‘Ndakatenga munda saka ndinoda kuenda kunouona; ndine urombo, ndakundikana.’ 19 Uye mumwe akati, ‘Ndakatenga mombe gumi dzekubopa* saka ndiri kuenda kunodziedza; ndine urombo, ndakundikana.’+ 20 Mumwezve akati, ‘Ndichangobva kuroora, saka handigoni kuuya.’ 21 Saka muranda wacho akaenda akanoudza tenzi wake nezvazvo. Tenzi wemba akashatirwa, akati kumuranda wake, ‘Kurumidza kuenda mumigwagwa mikuru nemidiki yemuguta, unouya nevarombo nemhetamakumbo nemapofu nevanokamhina.’ 22 Paakadzoka, muranda wacho akati, ‘Tenzi, zvamati zviitwe zvaitwa, asi muchiine nzvimbo.’ 23 Saka tenzi wacho akati kumuranda, ‘Buda upinde mumigwagwa nemutunzira unoita kuti vauye kuno, kuti imba yangu izare.+ 24 Nekuti ndinoti kwamuri, pavanhu vaya vainge vakokwa hapana kana mumwe wavo acharavira kudya kwangu kwemanheru.’”+ 25 Vanhu vakawanda vakanga vachifamba naye, uye akatendeuka akati kwavari: 26 “Kana munhu akauya kwandiri, iye asingavengi baba vake naamai nemudzimai nevana nevanin’ina nehanzvadzi, uye kunyange upenyu hwake* pachake,+ haagoni kuva mudzidzi wangu.+ 27 Munhu wese asingatakuri danda rake rekutambudzirwa* onditevera haagoni kuva mudzidzi wangu.+ 28 Semuenzaniso, ndiani wenyu asingatangi agara pasi kana achida kuvaka shongwe, kuti averenge zvaachashandisa, kuti aone kana aine zvinokwana kuzoipedza? 29 Kana akasadaro, anogona kuvaka faundesheni ozotadza kuipedza, vese vanoona votanga kumuseka, 30 vachiti: ‘Murume uyu akatanga kuvaka asi akatadza kupedza.’ 31 Kana kuti ndimambo upi anoti kana achienda kunorwa nemumwe mambo, asingatangi agara pasi onzwawo pfungwa dzevamwe kuti aone kana achikwanisa kumirisana nemauto 20 000 iye aine mauto 10 000? 32 Kana akaona kuti haazvikwanisi, paanenge achiri kure, anobva atumira vamiririri kuti vanokumbira kuti vave nerunyararo. 33 Saka nemiwo zivai kuti hapana mumwe wenyu anogona kuva mudzidzi wangu kana akasaonekana nezvinhu* zvake zvese.+ 34 “Kutaura chokwadi, munyu wakanaka. Asi kana munyu usisavaviri, ucharungwa nei?+ 35 Hauna kukodzera kushandiswa sevhu kana kuti semupfudze. Vanhu vanourasa. Ane nzeve dzekunzwa, ngaanzwe.”+
^ Kana kuti “zvipani zvishanu zvemombe.”
^ Kana kuti “akasasiya zvinhu.”